Nrụpụta ihe nkiri China Micro Bubble na Factory | Ceres
Special imewe maka ike jụrụ nzube.
Site na ịmepụta afụ ikuku mic nke na-emepụta mmetụta ikuku n'ime griin haus, na-ebelata oke okpomọkụ n'oge oge kacha ekpo ọkụ n'afọ. ọ na -ebelata nchekasị na osisi nke oke okpomọkụ na -ebute, na -eme ka mmepe ihe ọkụkụ dị mma.
Tụkwasị na nke ahụ, afụ mic ndị a na -emepụta mmetụta ọkụ na -agbasa nke ọma, nke na -enye nnukwu ịdị n'otu na mmetụta nke radieshon a na -ahụ anya n'ime griin haus, na -emepụta ikuku kacha mma maka uto osisi. Ọ nwere ihe nrụpụta UV pụrụ iche nke na -echebe megide radieshon UV, na -eme ka ihe nkiri ahụ na -eguzogide oke mbibi site na radieshon UV na ọgwụgwọ etinyere n'ime ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ngwongwo igwe ike: ihe nkiri coextruded 5 nwere nhazi dị mma.
Nnukwu nnyefe ọkụ a na -ahụ anya, nke osisi chọrọ ka o nyere aka na photosynthesis na usoro morphogenetic ndị ọzọ metụtara ya.
Mmetụta mkpuchi ọkụ dị mma nke ukwuu: Mmetụta nke ndị copolymers EVA, yana afụ gas mic n'ime ihe nkiri ahụ, na-emepụta ihe mgbochi megide radieshon IR nke ala na-ewepụta n'abalị, na-egbochi mbelata oke okpomọkụ (ọkachasị n'abalị) na iwepu ihe egwu. nke ngbanwe ọkụ nke nwere ike itinye ndụ osisi n'ihe egwu.
Na -eguzogide oke mbibi kpatara ìhè anyanwụ na ọgwụgwọ etinyere n'ime griin haus.
mic afụ ihe nkiri
Nke gara aga: Ihe nkiri gbasasịrị
Osote: Ihe nkiri karịrị akarị
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Mkpọchi mkpọchi ihe nkiri Greenhouse, Profaịlụ mkpọchi ihe nkiri Poly Greenhouse, Ihe nkiri Bale Kechie Maka Ọrịre, Profaịlụ na Zigzag Spring Waya, Spring Waya N'ihi Ịkpọchi Film, Profaịlụ mkpọchi griin haus, Ngwaahịa niile